नेपाली सेनाभित्र चलेकाे बीएमअार्इ अातंक के हाे ?
काठमाण्डौ । नेपाली सेनामा अहिले बीएमआई चर्चाको विषय बनेको छ । सामान्यतया बीएमआई भनेको अङ्ग्रेजीमा Body Mass Index को संक्षिप्त रूप हो । यसलाई स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा शारीरिक स्वास्थ्यको एउटा सूचक मान्ने गरिन्छ ।
बीएमआईले व्यक्तिको उमेर र उचाई अनुसार हुनुपर्ने वजन (तौल)को अनुपातलाई दर्शाउँछ । अर्थात् उमेर र उचाईको अनुपातमा कसैको वजन बढी अथवा घटी छ भने बीएमआईले त्यसलाई स्वस्थताको परिचायक मान्दैन ।
हाल आएर यहि स्वास्थ्य सूचकलाई नेपाली सेनाभित्र प्रमोशन सहितका अन्य सुविधा वृद्धिको आधार आधार बनाउने चर्चा चल्न थालेपछि सेनाभित्र अहिले बीएमआई चर्चाको विषय भएको हो ।
सेनामा बीएमआई लागू भएपछि प्रमोशन सहितका सुविधाहरू पाउन उमेर र उचाईअनुसार वजन (तौल) हुनुपर्ने छ । तर नेपाली सेनामा यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? बीएमआई नियम सबैलाई लागू हुन्छ कि कसैलाई रोक्नको लागि मात्रै लागू हुन्छ ? सेनाभित्र अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
यो नियमको परिकल्पनाकारका रूपमा अहिले नेपाली सेनाका जर्नेल शरद गिरीको नाम चर्चामा छ । सेनाको हेर्डक्वार्टरभित्र कार्यरत अन्य जर्नेलहरूका अनुसार जर्नेल शरद गिरी त्यस्ता पात्र हुन् जो सेनाभित्र ठूलै गेम खेल्ने मान्छेको रूपमा चिनिन्छन् ।
त्यसैकारण आफ्नो मान्छे माथि तान्न र बाटो सफा गर्नको लागि बीएमआई नियम ल्याइएको हुनसक्ने आंशका समेत सेनाभित्र चल्न थालेको छ । साँघु साप्ताहिकबाट ।